မေလ ၁၅ ရက်နေ့မြန်မာ့ သတင်း အကျဉ်း | Freedom News Group
မေလ ၁၅ ရက်နေ့မြန်မာ့ သတင်း အကျဉ်း
by FNG on June 15, 2012	ဇွန် လ ၁၅ ရက်နေ့မြန်မာ နိုင်ငံ တ၀ှမ်း ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည့် သတင်း များ ကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထား
ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မငြိမ်သက်မှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရာ စစ်တွေ မြို့ တွင် စားနပ် ရိက္ခာ ပြတ်လပ် လုနီးပါး
ဖြစ် နေ ပြီး မိုးရာသီ အတွင်း ရခိုင် နှင့် ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် များ မှာ နေထိုင် ရေး အတွက် အခက် အခဲ
ရှိသည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။
စစ်တွေ တွင် အရေး ပေါ် ဆေးဝါး နှင့် စားနပ် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ မှု အပူ တပြင်း လိုအပ် နေသည် ဟု
စစ်တွေ မြို့ပေါ် ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်း တာဝန်ခံ တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးသိန်းဌေးဦးက FNG ကို ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည် နယ် တွင် ဘင်္ဂါလီ များ ၏ မီးရှို့ အကြမ်းဖက် မှု များ မှာ ဆက်လက်ရှိ နေပြီး ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နံနက် လင်း အားကြီး အချိန် မှ ယနေ့ ည ၉ နာရီ ထိ မီးရှို့မှု အနည်းဆုံး ၁၀ ခုခန့် ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည် ဟု သိရသည်။ Credit to EPA
ပဋိပက္ခ များ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရာ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့တွင် စားနပ် ရိက္ခာ ၊ သောက်သုံးရေ နှင့်ဆေးဝါးများ ပြတ်လပ် လျှက် ရှိ သည် ဟု စစ်တွေ မှ လာသည့် AP သတင်း တစ်ရပ် တွင် ဖော်ပြထား သည်။ Credit : AP
ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးကို အမြန်ဆုံး ပြန် လည်ဖော်ဆောင် ပေးနိုင်စေရန်အတွက် ပြည်သူများ နှင့် မီဒီယာက ပူးပေါင်း ကူညီရန်
မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် က တိုက်တွန်း နှိုးဆော်သွား သည်။ Credit to MRTV 4
ယခင် က ရန်ကုန် နှင့် အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေ ပြည်တော် တွင်သာ ရှိခဲ့ သည့် နိုင်ငံ ကူးလက်မှတ် ထုတ် ပေး ရေး ရုံး ကို မန္တလေး တွင် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် မည် ဟု မော်ဒန် ဂျာနယ် တွင်ဖော်ပြထား သည်။
Tags: Buddhism, Burma, Maungdaw, MRTV-4, Myanmar Radio and Television, Rakhine State, Rohingya people, Thein Sein	From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ကျောက်နီမော် အာဏာပိုင်တွေ ရဲ့လုပ်ရပ် ဒေသခံ တွေ ရဲ့ဒေါသ ကို ဆွပေးသလို ဖြစ်နေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့နော်ဝေ ၀န်ကြီးချုပ် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ဖို့ ကိစ္စ ဆွေးနွေး →
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishMyanmar Emerges From the ShadowsUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeMyanmar's women boxers land blows for equalityUS blacklists Myanmar firms for arms trade with N.KoreaSoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockoutU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherMyanmar opium production highest in overadecade: UN27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,608,164 hits
WATCH: Buffalo FLIPS Attacking Lion Into The Air huff.to/1cONUAn via @HuffPostGreen 1 day ago
Thailand will hold elections by February 2; Yingluck may not be her party's choice to run, government spokesman says. 1 week ago